भबिस्य मा आउने बिद्यार्थी लाई अस्ट्रेलिया न-आउन आग्रह गर्दै बराल - कान्थिपुर
के अस्ट्रेलियामा बोर्डर इज पछि आस्ट्रेलिया आउने ठीक समय हो?
एमआईटीका विद्यार्थी प्रवीण बरालले हालको परिदृश्यको व्याख्या गर्छन् र यस लेखमा आउने योजना गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई केही महत्वपूर्ण सुझाव दिन्छन्।
विगत केही महिनामा आमूल परिवर्तन भएको छ जहाँ कोविड १९ को कारणले जिबन अस्त- बेस्त परेको छ। विश्वभरका मानिसहरू बिगत ६-८ महिनाको अवधिमा आफ्नो जीवनको सबैभन्दा खराब क्षणहरू मध्ये एक देखे जुन अहिले सम्म पनि चलिरहेको छ। विभिन्न देश जस्तै यो कोविद-१९ ले अस्ट्रेलिया मा नि असर गरो र सबसे धेर प्रभाभित अन्तरास्ट्रिय विद्यार्थीहरू भए !
अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरू, उनीहरूले यस अवधिमा कठिन चुनौती भोग्नु पारो । अस्ट्रेलियाको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई त्यो कठिन समयमा कुनै खालका सयोग गर्न चाहेन ! अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलियाको अर्थव्यवस्थामा अरबौं डलर योगदान गरिरहेको हामी सबै लाइ अवगत नै छ ! अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले अष्ट्रेलियामा आफैंलाई सहयोग गर्न नसक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको घर फर्कन भने जुन त्यो समय मा प्रशंसनीय थिएन !
बराल भन्छन, तेस्तो भनेको केहि महिना नबित्दै अस्ट्रेलिया ले अस्ट्रेलिया बाहिर अड्किएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलिया फर्कौना धेरै प्रयास गरिरा को देखिन्छ! बराल फेरि थप्छन, यहाँसम्म कि उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू ल्याउन कडा प्रयत्न गरिरहेका छन्।
अस्ट्रेलियामा यहाँको काम सुक्खा छ, हजारौं अस्ट्रेलियावासीहरूले आफ्नो जागिर गुमाएका छन जसले अष्ट्रेलियामा आएका नयाँ आगन्तुकहरूलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।
बराल पनि भन्छन कि नयाँ आगन्तुकहरूले रोजगारीका साथै अध्ययनमा चुनौतीहरू पनि सामना गर्ने छन किनकि अध्ययन अनलाइन भइसकेपछि शिक्षाको गुणस्तर कम भएको छ। उनी यो पनि थप्छन् कि नेपालमा अध्ययन गर्नु राम्रो हो जहाँ गुणात्मक संस्था छन् जुन सस्तो पनि छ। मेरो सबैभन्दा ठूलो सुझाव आईटी विद्यार्थीहरूको लागि हुनेछ किनकि म एकै पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ र मैले अनुभव गरेँ कि शिक्षाको गुणवत्ता मेरो स्नातक डिग्री भन्दा कम तर्फ थियो जुन मैले नेपालमा ब्रिटिश डिग्री अध्ययन गरेको थियो। नेपाल आईटीको क्षेत्रमा उदाइरहेको छ जसले आईटीमा विद्यार्थीहरूको लागि अवसर सिर्जना गर्दछ र आईटीमा उनीहरूको क्यारियर सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
बराल, उनले अस्ट्रेलियामा शिक्षा विद्यार्थीलाई ज्ञान थप्ने भन्दा बढी व्यवसाय भएको बताए।
अष्ट्रेलियामा पढ्न आउने धेरै विद्यार्थीहरू मध्यवर्गीय परिवारका हुन् र उनीहरूले शुल्क र बिल तिर्न अष्ट्रेलियामा गर्नु पर्ने थियो जुन पहिले चुनौतीपूर्ण थियो, वर्तमान अवस्थामा यसले अझ चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।
केहि महिना पछि अष्ट्रेलियामा आउन सोचिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई मेरो इमानदार सल्लाह तपाईको फाईनेंसको राम्रोसँग योजना बनाउनुहोस्, माथि बताइए अनुसार रोजगार पाउन गाह्रो छ। कृपया यो संकटमा यहाँ आएर डिप्रेसनमा नजानुहोस्। बराल अन्तिम मा भनछन उत्तम समाधान भनेको तपाईको अध्ययन नेपालमा जारी राख्नु र अवसरहरूको अन्वेषण गर्नु हो। त्यहाँ सीमित अवसरहरू छन् तर धेरै मूल्यवानहरू, कृपया यसलाई गणना गर्नुहोस्।
जेभियर इन्टरनेशनल कलेज एसियन स्पिच कम्पीटीसन हालैमात्र सम्पन्न
२०७७ आश्विन २० गते, मंगलवार
“रु.१ हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि आत्महत्या गरेका खरिदार अदालतबाट निर्दोष ठहर”
अनलाइनबाटै सोह्र श्राद्ध गर्न नगरपालिकाको आग्रह
२०७७ भाद्र १३ गते, शनिबार